Landela ii-hashtag, obunye ubuhlanya obuyimpumelelo be-Instagram | Iindaba zeGajethi
I-Instagram ayifuni ukuba unxibelelane nabantu obathandayo, injongo yayo kukuba uchithe ixesha elininzi nangakumbi linamathele kwisicelo sayo. Ngapha koko, uninzi lweziyobisi ze-Instagram mhlawumbi umxholo unqabile, kodwa ungakhathazeki, iqela lophuhliso likaFacebook liya kuhlala linesizathu esihle sokukunika ukuze uphinde usebenzise inqanaba ledatha yakho kunye nebhetri yakho ngendlela egqithileyo.
Olu luvo lokugqibela kwaye alunangqondo abanalo. Uya kuba nakho ukulandela ii-hashtag, ewe, njengoko uvile. Koko kukuthi, Uyakwazi ukubanolwazi ngomxholo ofanelekileyo malunga nezinto onomdla kuzo ngokulandela igama okanye iqela labo.
Ii-hashtag kude kube ngoku zazingeniswe ngesandla kupapasho lwethu okanye kumabali ukuze zibonelele ngokunokwenzeka ngokunqakraza kuzo kunye nokuseka ukukhangela ngokukhawuleza kwezi zinto zinomdla. Nangona kunjalo, Ngoku i-Instagram igqibe kwelokuba isike ilahleko zayo kwaye ikugcinele lonke elo xesha, uya kuba nakho ukulandela ii-hashtag petarán Ixesha lakho lomxholo omelekileyo womdla wakho, kwaye yeyiphi ngokuqinisekileyo engayi kusilela kwintengiso, ngasendleleni, iya isanda ngobuninzi beevidiyo kunye namabali achitha inqanaba ledatha yethu ngaphandle kwesizathu, sinokuthi siyahlawula ukubona intengiso.
Ngoku kuhleli nje ukubona ukuba inkqubela phambili yalomsebenzi mtsha uqhubeka njani, kunye nokwazi ukuba i-Instagram yongeza iindaba. Inyani yile yokuba yinethiwekhi yoluntu ebetha kakhulu ngobuchule bayo, uninzi luphela lukubamba ngakumbi ukuba kunokwenzeka abasebenzisi bayo. Ngoku siza kuba nokutya kwee-hashtag, siza kubona ngoko nangoko zonke izihloko ezibamba umdla wethu, oku kufuneka sikhethe ubuncinci kunye nomdla wethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Landela ii-hashtag, obunye ubuhlanya obuyimpumelelo kwi-Instagram
Yenza iikhredithi zakho ze-Star Wars kwi-smartphone yakho ye-Android ngamagama e-Star
Kwaye nantsi i-Samsung Galaxy S9 entsha